Nharembozha Email Statistics
Muvhuro, April 9, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pamwe chete nevanhu vakuru (uye vanotsigira), Delivra… takagadzira iyi inoshamisa infographic iyo ine zvese zvawanga uchida kuziva nezvekuti vanhu vari kushandisa sei nhare kuwana maemail avo. Delivra inopa nyanzvi yeemail kushambadzira masevhisi pamwe neplatifomu yavo. Ivo inoshamisa kambani ine yakanakisa vanhu vane hanya chaizvo nevatengi vavo. Kushambadzira kwenhare HAZVI kuenda chero nguva munguva pfupi! Delivra inoda kukubatsira kugadzirira email yako kushambadzira uye uwane